Yintoni iRedamp Rock? - Oldies Iingoma kunye neebhanki
Liyintoni Idwala Lomlambo?
Ukujongwa kwesi mixisi saseMzantsi selizwe, i-funk, nomphefumlo
"I-Rock Rock" yinto engafanelekileyo ukungaqondakali - ididekile ngabangaphandle kunye nokuhamba kwe-Cajun R & B ye "ipamp pop" okanye, ngokugqithiseleyo, ilawulwa kuphela ekuchazeni iingoma malunga namanxuwa aseMerika yaseMzantsi, esuka eLouisana ukuya eFlorida. Enyanisweni, "i-rock rock" yintsimi yomnxeba: umphumo wokudibanisa i-rockabilly artists kunye nomoya oqhutywe phakathi kwama-60s, uncedwa ngumngcipheko omkhulu we-gritty sub-genre eyaziwa ngokuthi "i-swamp blues, "kwaye kunye ne-backbone enemigqabhagqabhagqabhagqabha, ekuthiwa yinto elula kakhulu, yayingachazwa ngokucacileyo njenge- funk.
Yisitayela esisiqalo sayo esisezantsi.
Njengoko ii-rock musicians "zeNew South" zijikelele emphefumlweni welizwe ezivela kwiindawo ezinjengeMemphis kunye neMiscle Shoals, zibandakanya kuwo kumculo wazo: ingoma efana ne "rock rock" ingoma idibanisa nomoya onzulu kunye nelizwe eliluhlaza, blues, kunye nokubetha. (I-"bampu blues" enombuzo yenziwe yilebula ye-Excello ye-Excello kwiminyaka eyi-50 ezayo emva kwee-musicians ezifana neSlim Harpo, Lazy Lester, Lightnin 'Slim, kunye noRoscoe Shelton .) Yayikhokelela kwinqununu echaza umgca wegitala lomlambo we-swamp: ezingcolileyo, kwaye zizele i-reverb (kunye ngamanye amaxesha, ukuze uthinte umnxeba, u-wah-wah). Amacilongo ahlala ekhona ngenxa yempembelelo yomphefumlo, nangona igitari solos ininzi ngaphezu kwe-sax solos. Kwaye nangona umxholo udla ngokumnyama kwaye uphazamise njengomculo ngokwawo, iindaba ze-swampland azikho imfuneko kumculo we-swamp; loo ndlela yaqala kuphela xa, kuncedwa kunye 'nokuzincama kwelo hlobo, lithatha i-Aireves e-Seventies yokuqala.
Njengomculo osemphefumlweni okanye "iingcambu" zomculo, iRampamp Rock ibonakala iluma uthuli xa kufika i-disco, kodwa ivukile ethuneni kwi-90s, njengamaqela omdaka kunye neAmericana izenzo zaqala ukuzifumanisa kwaye zibandakanya kwisitayela sazo. Kodwa khumbula: akusiyo ipampu pop!
Eyaziwayo njenge: Swamp Pop, Swamp Blues
Imizekelo yerwala lempampu:
"I-Polk Salad Annie," uTony Joe White
Ukugqibelela ngokunyaniseka kukaTony Joe ubuntwaneni bakhe kwi Delta South kamva uMcdonald wasebenzisa oko ukuzama ukuzisa umgca wokutya komphefumlo kuMcRib. (Akunjalo ukuba akukho nto inokuyenza.)
"Wazalelwa e-Bayou," uKreedence Clearwater Revival
Umholi weCCR uJohn Fogerty wayephelele kakhulu ekusebenziseni i-psychedelic textures kwi-rock samanzi ukuze ufune ukuziva ukuba intshontshi ikubetha kwi-intro.
"UAmosi uMoses," uJerry Reed
Inkcazo yeklasi enenene malunga nexhaphozi yaseLouisana, equkethe ingalo enye engekhoyo, kunye nokukhathazeka, uShefri omileyo.
"U-Suzie Q," uDale Hawkins
Ukuzalwa okunokwenzeka kwedwala le-swamp, inverted and extreme bluesy rockabilly loo mijelo ephefumlelweyo yama-guitar kunye ne-Americana abanomdla.
"Hush," uJoe South
Kamva wancincizela kwi-pop-evangelised pop pop, kodwa iingoma ezenza igama likaJoe kwindawo yokuqala lalizalisekile ngobuhle.
"Niki Hoeky," I-Redbone
NjengaCreedence, le quintet yayiyimpahla yaseCalifornia eyayikhathazeke kakhulu ngeenkcubeko zaseMzantsi Afrika. Umxube wabo odibeneyo waseMexico / iMveli yamaMerica aseMerica mhlawumbi awazange akhathaze, nokuba kunjalo.
"Omntu Omkhulu," uElvis Presley
I-Jimmy Reed yakudala esuka kuVee-Jay, yaphinda iphinde ibe yinguqulelo, i-King-worshier, eyinkulu ye-rock foster booster.
"Ndihamba Ngamaqabunga," uDkt John
Kwakhona ukudibanisa i-psych kunye ne-swamp kwaba yi-Night Tripper ngokwakhe, owazikhethela ekuxubeni isimo sengqondo se-glam kunye ne-voodoo funk.
"Izigulane Neenyoka," uJim Stafford
I-Stafford ekhethekileyo kwizinto ezintsha, kodwa ngokuqinisekileyo wayenayo into ye-funk yelizwe.
"Struttin '," uElvin Bishop
I-Rednecks ngokunxanwa kwe-blues guitar inomdla wokwenza i-swampers engcono, kwaye iBhishop yayingumntu oyedwa-jam band.
Iprofayile: Carole King
I-Glam Rockers Abafake uhlobo lohlobo
Xa iRecent Disco
I-Chi-Lites: I-Uptown Soul i-Matter
I-Gold ebonakalayo eqinileyo: Ndifuna Ukubuya
Isikhokelo sakho kwiR & B ezingcono ze-R & B zika-1976
Ulwazi oluninzi kakhulu: I-10 yeyona nto ikhethileyo yee-70s zothando
Ukuguqulwa kwesiguqulelo - Ingxelo yeBhayibhile yeBhayibhile
Inkcazo yeZiseko eziNzileyo kunye nemizekelo
Indlela Yokunquma Yiphi Imoto Okufuneka Uyibuyise
ENgilani: King Edward I
Hlangana noBrown Rapper uBobby Bishop
Kuthetha ukuthini ukuba ne-Hypersensitive?
Iingcebiso zokuphucula ukusetyenziswa kwakho kwesiFrentshi
Uphi uvavanyo lwe-LD50?
Iimpawu zeNkohlakalo zeNigeria Zisebenzisa i-FBI Letterheadhead
Ukuxhasa ukuziphatha okulungileyo kwiNtsebenzo engcono yezemfundo
UMoya oyiNgcwele uLuka, uVangeli
I-Essential Thrash Metal Albums
Biography kaLois Lowry
Kutheni iBhakeyisi? Izizathu eziphezulu zokuhamba
Ilkley Moor kunye namadoda aseMnyama